Bu'aa Herrega Gabatee, Gabatee Garagara irratti Agarsiisu.
Bu'aa Herrega Gabatee, Gabatee Garagara irratti Agarsiisu
Gabatee tokko irratti man'ee kessatti kolachuuf bu'aa issa gabatee garagaratti agarsiisu nidandessa.
Galmee barruu bani, gabatee tarjaaf taree hedduu qabaataan saagi, kana booda gabatee kabiroo man'ee tokko of keessaa qabuu saagi.
Gabatee guddaa wara man'ee hamma tokko qabaaten lakkoofsa galchi.
Man'ee tokko wajjin gabatee irratti qaree ka'i, issa boda F2 dhibii.
Foormuulaa Kabalaa, faankishinii hojjechuu barbaadde galchi fakkeenyaaf, =SUM.
Man'ee gabatee guddaa keessaa isa lakkoofsa of keessaa qabu cuqaasitii, mallattoo idaatii (+) dhiibi, kana booda man'ee adda addaa lakkoofsa of keessaa qaban keessa cuqaasi.
Yoo barbaadde, gabatichii akka barruu baratamootti dhangeessuu nidandeessa. Gabaticha goodayyaa keessatti saagitii, kana booda goodayyaa akka arfii tokkootti korkoddi. Goodayyaan, yammuu ati barruu saagdu ykn haqtuu, barruu cinaatti akka korkoddaa'eetti taa'a.
Galmee Barruu irratti Foormulaa Xaxamoo Herregi
Galmee Barruu keessatti herregu
Galmee barrutti bu'aa foormulaa herreguf maxxansi
Man'ee gabatee irratti walfaannee ida'amii herregi
Gabatee Gamaa-gamana Herregi
Title is: Bu'aa Herrega Gabatee, Gabatee Garagara irratti Agarsiisu.